CDC Inokurumidza Meseji yeVaccinated maAmerican: Iyo Booster Shot
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » CDC Inokurumidza Meseji yeVaccinated maAmerican: Iyo Booster Shot
Health News • LGBTQ • nhau • USA Kuputsa Nhau
14 mamirioni vanhu muUnited States avo vakagamuchira mushonga weJohnson naJohnson vakanzwa vakanganikwa uye kumashure. Nhasi izvi zvinogona kunge zvachinja pamwe nekumirira kurudziro yeiyo booster kupfura kweanopfuura makore gumi nemasere ekuberekwa.
CDC, Iyo Chirwere Chetachiona Chekudzivirira uye Kudzivirira muUnited States yakaburitsa nhungamiro chaidzo kumaAmerican uye nemeseji yekukurumidzira nguva yekuwana booster yetatu masvondo matatu apfuura
Izvo zvakakosha kuti unzwisise yekutanga uye yechipiri doses yeiyo COVID-19 jekiseni inotungamira kupfuura chero ipi booster kupfurwa
Nhasi boka revanyanzvi vekunze neChishanu rakayambira Chikafu neDrug Administration kuti vape mvumo yekuwedzera jekiseni reJohnson & Johnson coronavirus revanhu vane makore gumi nemasere zvichikwira.
Dhipatimendi rehutano mu50 US-States vari kugadzira yavo vhezheni yeruzivo rwekumashure uye kurudziro, zvichiita kuti nyaya yese ive yakaoma uye dzimwe nguva inokanganisa
Mushonga wekutanga, maviri-akapfura COVID-19 yekudzivirira Pfizer neModerna inopa dziviriro yakanakisa kubva kuzviratidzo zvakakomba, kuradzikwa muchipatara, uye kufa. Yekutanga neyechipiri dosi yemushonga inofanirwa kutora pamberi pechinhu chipi nechipi chekuwedzera. Nzira yakanakisa yekudzivirira mhuri nenharaunda ndeyekuona kuti vagari vasina kubayiwa majekiseni vapedza mishonga yavo yekudzivirira.
Yekusimudzira pfuti yePfizer ikozvino iri kukurudzirwa kune mamwe mapoka akakosha kuti awedzere maitiro avo ekudzivirira immune kuCOVID-19 uye nekuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi, kusanganisira musiyano weDelta.
Nei uchifanira kufunga nezvekukurudzira?
COVID-19 majekiseni anoramba ari chishandiso chinoshanda kwazvo chekudzivirira kurwara kwakakomba, kugara muchipatara, uye kufa, kusanganisira dziviriro kubva kune dzakasiyana-siyana kutenderera kweDelta.
Zvisinei, zvidzidzo zvakaongororwa neCenters for Disease Control and Prevention (CDC) zvinoratidza kuti mushure mekubaiwa zvakakwana jekiseni, kudzivirirwa kubva kuhutachiona hunokonzera COVID-19 kunodzikira nekufamba kwenguva uye kunopa kudzivirirwa kushoma pamusiyano weDelta.
Ndiani anofanirwa kutora booster shot?
Vamwe vanhu vari panjodzi yekuwedzera hutachiona kana chirwere chakakomba kubva kuCOVID-19 nekuda kwezera ravo, mamiriro ehutano, kana nekuti vanogara kana kushanda padhuze nevamwe vanovaisa mungozi yekuratidzwa kana kutapurirana.
ICDC inokurudzira zvikuru kuti zviwedzerwe kupihwa vanhu vakuru vane makore makumi matanhatu nemashanu zvichikwira uye vane makore makumi mashanu kusvika makumi matanhatu nematanhatu nemamiriro ekurapa nekuti kudzikira kwekuzvidzivirira mumapoka aya kunovaisa panjodzi huru yekurwara zvakanyanya. Naizvozvo, iyo Dhipatimendi rehutano mumatunhu mazhinji akakurudzira kuti vatapi vezvehutano vape pekutanga kumapoka aya.
Sekupihwa kwekuwedzera kwekuwedzera, CDC ichaita kurudziro yemamwe mapoka, kusanganisira vakuru vane makore gumi nemasere kusvika makumi mana nematanhatu nemamiriro ekurapa anotarisana nezvakanakira nenjodzi kune mumwe nemumwe, uye vakuru vane makore gumi nemasere kusvika makumi matanhatu vari panjodzi huru yekushanda kana masangano kuburitswa, zvichibva pabhenefiti uye njodzi kune mumwe nemumwe.
Kungofanana nevagari vaifanira kumirira nemwoyo murefu nguva yavo kana majekiseni eCOVID-19 akatanga kuunzwa isu tese tinofanira kuratidzira aloha uye uve nechokwadi chekuti mapoka akasarudzika ekutanga anotambira nyowani yavo, chikamu chemurairidzo wakapihwa kuvagari muHurumende yeHawaii.
Iyo Pfizer booster ndeye chete yeavo vakagamuchira mushonga wePfizer; haina kukurudzirwa kune avo vakagamuchira mushonga weModerna kana Johnson & Johnson.
Mishonga yekudzivirira zvirwere yeModerna naJohnson & Johnson iri kuongororwa kuongororwa kwavo uye avo vakabaiwa majekiseni aya vanofanira kumirira kusvikira vese FDA neCCC vaburitsa kurudziro yavo. Chikamu chekutanga cheichi kurudziro chakatopedzwa uye chakamirira zviziviso zvepamutemo.
Unofanira kuwana rinhi rinokurudzira?
Iyo parizvino inokurudzirwa nguva yePfizer booster ndeyemwedzi mitanhatu iwe uchinge wapedza ako maviri ekutanga kupfura. Dhata kubva kuongororo yekiriniki yakaratidza kuti iyo Pfizer-BioNTech booster shot, iyo yakatenderwa kuti ishandiswe neKudya neDrug Administration, inoratidza kuti kwaive nekuwedzera kwekudzivirira immune pakati pevatori vechikamu vekuyedza avo vakapedza avo maviri-akapfura Pfizer vaccine akateedzana mwedzi mitanhatu. pakutanga.
OVID-19 Vaccine booster shots anowanikwa kune anotevera Pfizer-BioNTech vanogamuchira vaccine avo vakapedza yavo yekutanga nhanho kanenge mwedzi mitanhatu yapfuura uye vari:
Zera 18+ vanoshanda mukati marongero ane njodzi huru
Zera 18+ vanogara mukati marongero ane njodzi huru